ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) – အချက်​အလက်​လုံ​​လောက်ခြင်းဆိုင်​ရာ ​မေးခွန်းများ (၁) | MoeMaKa Burmese News & Media
​ရွေး နိုင်​​သော အ​ဖြေများ –
ဥပမာ – n .15. 12 .9. 20
(အယ်ဒီတာ မှတ်ချက် – GMAT လမ်းညွှန်အတွက် အထောက်အကူအဖြစ် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်)